त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक उप्रेती बिएन्डसी मेडिकल कलेज प्रमुख – Everest Dainik – News from Nepal
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक उप्रेती बिएन्डसी मेडिकल कलेज प्रमुख
काठमाडौं, साउन ८ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) मा कार्यरत प्राध्यापक डा. रामप्रसाद उप्रेती झापाको बिएन्डसी मेडिकल कलेजको प्रमुख (प्रिन्सिपल) मा नियुक्त भएको पाइएको छ। उप्रेतीले आइतबारदेखि बिएन्डसी अस्पतालको प्रमुखको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
टिचिङ अस्पतालमा आगामी पुस ३ गतेसम्मको पदावधि भएका उप्रेतीले अवकाश हुनुभन्दा ६ महिनाअघि नै चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) सँग अनुमति नै नलिई बिएन्डसी मेडिकल कलेजको प्रिन्सिपलको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्। विवादित उक्त कलेजले कुनै पनि विश्वविद्यालयबाट हालसम्म सम्बन्धन पाएको छैन।
आइओएमका डिन प्रा.डा. जगदीश अग्रवालले आइओएमअन्तर्गत काम गर्ने कसैले निजी मेडिकल कलेजमा गएर काम गरेको छ भने त्यो गैरकानुनी हुने बताए। उप्रेतीले राजीनामा दिएको आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए। बिएन्डसीको प्रिन्सिपलको भूमिकामा काम गर्न उप्रेतीलाई त्रिविको कानुनले नदिने उनको भनाइ छ। यो खबर आजको नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो।
ट्याग्स: त्रिवि शिक्षण अस्पताल# डा. रामप्रसाद उप्रेती, बिएन्डसी मेडिकल कलेज# प्रिन्सिपल
क्वारेन्टाइनबाटै युवक फरार